Bishii Ogosto 2020, dufcaddii ugu horreysay ee biirka Quruxda Madoow ayaa si guul leh loogu geeyay suuqa Ruushka ee Bariga Fog. Maaddaama ay tahay nooca caanka ah ee biirka shirkadda brewery ee JINBOSHI, tani waa markii ugu horreysay ee biirka Quruxda Madoow ay galaan suuqa Ruushka. Sanadihii ugu dambeeyay, baahida loo qabo biirka tayada sare leh waa ...
Maaddaama aan nahay mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dhoofinta daasadaha aluminium ee laba-qaybood ka yimid Shiinaha, annaga ERJIN CAN waa qibrad iyo xirfad u leenahay inaan ku taageerno xirmadaada biirka / cabitaanka ee ku jira gasacadda. Daasadda ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa biirka, khamriga, cabitaannada fudud, cabitaannada tamarta, casiirka, shaaha, kafeega, biyaha dhalaalaya, iwm oo waxaan ...
Bandhigga Jinan Erjin ee Bandhigga Kanton Online-ka 127-aad
Sannad kasta, Canton Fair waxay soo jiidataa iibsadayaasha adduunka oo dhan si ay ugu soo ururiyaan Guangzhou si ay u iibsadaan alaabooyinka, iibiyeyaasha ilaha iyo is dhaafsiga khibradaha. Waxaa loo yaqaan "Bandhigga 1-aad ee Shiinaha". Faafitaanka caalamiga ee COVID-19 dartiis, Carwadii 127-aad ee Canton ayaa lagu qabtay onl ...
Khafiifa 310ml Aluminium Can, Aluminium Can 330ml Heerka, Aluminium Can 310ml Sleek, Aluminium Can 355ml Heerka, Aluminium Can 250ml Jilicsan, Khafiifa 200ml Aluminium Can,